Ungaziva sei kana yako Wi-Fi network yakachengeteka neWifislax | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe waisaziva, Wifislax Iyo inoshamisira kwazvo kugovera kweLinux, iyo inouya nenhamba huru yemapurogiramu akatsaurirwa kune isina chengetedzo yekutarisisa, ndiko kuti, kutarisa kana yako Wi-Fi network yakachengeteka.
Vanhu vazhinji vanoshandisa chirongwa ichi kuita zvinangwa zvakashata, ndiko kuti, kubata mahara Internet kubva kumuvakidzani. Iyi dzidziso inoitirwa kurwisa yako wega network uye edza kuona kana ichigona kurwiswa kana kwete, kwete kuba internet, saka ini handisi mhaka yekuishandisa zvisizvo kwayo.
1 Matanho ekutanga
2 Kutanga tarisa paWifislax
3 Wep kiyi, nyore kutora kunze
4 WPS, chihwitsi
5 WPA / WPA2 kiyi, isu hatisi kunyatso chokwadi parizvino
6 Zvimwe zvinhu zvinobatsira kubva mukuparadzira
7 Ndinoziva sei kuti ndiri kubirwa?
8 Chengetedza password yako
Chinhu chekutanga kuita kurodha pasi iyo ISO mufananidzo weWifislax, iyo yatinogona kuwana pane webhusaiti ye wifislax. Zvakare kune vanhu vanoshandisa iyo yekare Wifiway kana kunyangwe iyo Backtrack kana Kali Linux nemirairo, asi Wifislax ndiyo yekumusoro-soro uye iri nyore kushandisa. Kana iwe uchizoshandisa muchina chaiwo, ramba uchifunga kuti iwe uchazoda yega Wi-Fi kanyanga (ndokuti, hausi kuishandisa pamushini wemuno).
Kutanga tarisa paWifislax
Iyi sisitimu yekushandisa inowanzo shandiswa mu Live CD boot, nekuti hapana munhu anowanzo kuiisa (kunyangwe ichiwanzoitwa). Iyo inouya nematafura maviri, KDE ndiyo huru uye iyo inouya neese mashandiro uye iyo Xfce ndiyo yechipiri uye inoitirwa zvikwata zvepasi-zviwanikwa. Ose maviri anouya nezvose zvaunoda kurwisa netiweki yeWi-Fi, chero nenzira.
Wep kiyi, nyore kutora kunze
Kana yako netiweki yeWi-Fi yakatakura Wep-mhando chengetedzo, inogona kubviswa zviri nyore neiyi sisitimu inoshanda. Kune izvi, iyo aircrack suite inoshandiswa, kunyanya iyo airoscript, iyo inobvumidza kuzviita ine graphical interface pachinzvimbo chemirairo sezvaiwanzoitwa mumazuva ekare. Ichi chirongwa chinogona kuwanikwa mune zvinoshandiswa / aircrack suite / airoscript Wifislax. Pano isu chete tinofanirwa kudzvanya 1 kutsvaga network yedu, 2 kuisarudza, 3 kubaya mapaketi uye 4 kuirwisa, uchishandisa iyo aircrack sarudzo ine 100.000 data mapaketi kana iyo Wlan decripter sarudzo kana kiyi iri mhando wlan_xx (iine mapaketi mana watove Bhegi).
Makore apfuura, sisitimu yekusimbisa yeWi-Fi network inonzi WPS yakabuda, iyo yaive neiyo nekudzvanya bhatani, taigona kubatana tisingafanirwe kuisa password. Vanhu vakazviziva izvozvo zvaive nyore kurwisa pini yeWPS yeneti kupfuura kiyi, sezvo ichi chingova nhamba chete. Kiyi yeWi-Fi kana iwe uine WPS inogoneswa, unogona kunge uchitova nekiyi WPA2 ine zviratidzo, nhamba uye tsamba, izvo zvisina kuchengeteka. Kuti uedze, isu tichaenda kune zvinoshandiswa / WPA-WPS / WPSPingenerator. Ichi chinyorwa kubva kuchirongwa cheReaver, icho chinorwisa mapini eWPS. Zvekare zvakareruka kushandisa uye zvirokwazvo tinowana password yedu, kunyanya kana ichibva kuMovistar, inobuda mumasekonzi maviri kana matatu.
WPA / WPA2 kiyi, isu hatisi kunyatso chokwadi parizvino
Kunyangwe isu tiine WPA2 kiyi uye isu tabvisa WPS, vanogona vachiri kubvisa kiyi, vachishandisa izvo zvinonzi duramazwi kurwisa, umo mazwi ese muduramazwi anoongororwa kuti aenderane nekiyi. Kune akawanda maduramazwi paInternet, kubva kudiki diki 1 GB maduramazwi kusvika kune makuru 500 GB ane mamirioni emazwi uye musanganiswa. Tine airoscript neduramazwi rakadzokororwa, tinogona kuedza kurwisa netiweki yedu.Makiyi eWPA ane chengetedzo yekuwedzera iyo inotimanikidza kuva nekubatana ruoko kuti tibatane, zvisinei, zviri nyore kwazvo kuwana, nekuti isu tichafanira chete kuedza kupinda network kubva kune chimwe chishandiso (ndichiri kuisa password isiriyo). Kana tangove nayo, tinonyora nzira yeduramazwi muaccrack uye chirongwa chinotanga kurwisa. Zvinogona kutora chero kubva 1 awa kusvika kumavhiki akati wandei, zvinoenderana nekusimba kwekiyi.
Zvimwe zvinhu zvinobatsira kubva mukuparadzira
Pasina kupokana, kugovera uku kuzere nezvinhu zvinobatsira, zvakare kuve nechengetedzo yemacomputer. Izvo hazvisvike padanho reKali Linux mune izvi, asi zvakare ine zvinhu zvakaita seYamas chirongwa kuita munhu ari pakati pekurwiswa (ita kuti iwe upfuure neiyo router kuti uwane iyo yese data) uye mamwe mapurogiramu ekuchengetedza.
Ndinoziva sei kuti ndiri kubirwa?
Kuti uzive kana iyo Internet iri kubiwa, iwe uchafanirwa kufunga nezve dzinoverengeka zvinhu.
Yekumhanya bvunzo: Kana kumhanya kwako kuchinonoka kupfuura zvakajairwa, zvinogona kunge zviri kuti mumwe munhu ari kuba kwauri.
IP inopokana: Kana iwe ukawana iyo ine mukurumbira "kune IP kero inopokana" meseji, zvinogona zvakare kuve kuti mumwe munhu akapaza mukati asina mvumo.
DHCP danda: Kupinda iyo router kumisikidzwa, tinogona kuona kuti ndeapi makomputa akabatana kunetiweki. Kana paine zita risinganzwike kujairika kana iwe ukasawana maakaundi, ivo vapinda.
Chengetedza password yako
Kana kuyedza kurwisa network yako kwabudirira, zvinoreva kuti tiwe network iri panjodzi uye kuti iwe unofanirwa kuzvichengetedza nemamwe matanho.
Kunze kweWPS: Pinda muzvirongwa zve router yako (nekutaipa gedhi muwebhu browser yako) uye bvisa iyo yakaipa WPS kubva pazvirongwa. Izvi zvatove kukuparadzanisa iwe kubva ku50% yekurwiswa.
WPA password: Zvinoshamisa kuti pachine vanhu vanoshandisa makiyi eWEP, tsika yekudzivirira. Nguva dzose sarudza WPA2 kiyi.
Dzorerazve network: Kana iwe ukachinja iyo ESSID (zita renetiweki), iwe unenge wakachengeteka kubva kune password yekuona zvinyorwa izvo kunyangwe zvisina basa zvakanyanya zvinogona kuita basa (ivo vanongobvunza ESSID neBSSID).
Yakasimba pasiwedhi: Usambofa wakasiya pasiwedhi password (nekuda kwezvakanyorwa uye nekuti muvakidzani anogona kuiwana nekutarisa pasi pe router paanoenda kumba kwako kunotora munyu). Shandisa yakasimba password, ine manhamba, mavara uye akasarudzika mavara, saka iwe unozodzivirira kuti maduramazwi anogona kuibvisa nyore.
Zvimwe zvekuchengetedza matanho: Izvo zvakakosha kuti yako router inokudzivirira kubva kune kumwe kurwiswa kwakadai sekurwiswa kweiyo router kana murume ari pakati
Yakarongedzwa neMAC uye zvinyorwa zvekuwana: Kana muvakidzani wako ari munhu ane hunyanzvi hwaChema Alonso, edza kuisa MAC kusefa pane iyo router, ichiita kuti igamuchire chete kero yeMAC yemakomputa ari mumba mako. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe ivo vachiziva password, havagone kupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuziva kana yako Wi-Fi network yakachengeteka neWifislax
Mac kusefa kwakaratidzirwa kuve kusingabatsiri zvachose uye chiri chinhu icho iye anorwisa anogona kuvhara uye nyore kuchinja. Pasina mubvunzo, chimwe chimwe chipingamupinyi, asi zvinonetsa kana zvasvika pakuunza matoyi matsva nemidziyo kumba iyo yatinoda kushandisa yedu yemuno network. Saka kuti isu tine DHCP server mune iyo router kana pakupedzisira tinofanirwa kuvabatsira imwe neimwe. :)
Zvino, ini handina iyo, asi ndeimwezve yekuchengetedza chiyero.
Iye anorwisa achasarudza kubvisa imwe network pane kubvisa yedu kana aine chengetedzo yakadaro, nekuti zviri nyore kwaari nenzira iyoyo.
Parizvino hapana yakachengeteka system, pakupedzisira kunyange Appel akange apinda chengetedzo ye iPhone yake, iyo yakazoona kusagadzikana.
Pindura kuna eno
Manjaro zvakare ine yazvino vhezheni yeLXQT